Ozi niile na mmelite 1.5 nke PUBG Mobile na-eweta | Gam akporosis
Ozi niile nke PUBG Mobile melite 1.5 na-eweta
Aaron Rivas | | Noticias, PUBG Mobile
Enwere otu mmelite ohuru nke PUBG Mobile, na ọ bụ 1.5. Nke a na-abịa na ọtụtụ mgbanwe na-atọ ụtọ, akụkọ na ndozi, dị ka mbelata oge nke agha ahụ na ọnụahịa nke otu, ngwa ọgụ ọhụrụ, usoro na ọrụ, na ndị ọzọ. Anyị na-ezipụta ha n'ihu ke kwachie ndetu.
E nwere ọtụtụ ihe ọhụrụ ị ga-ahụ, mana n'okpuru anyị ga-achikota ndị kachasị mkpa. N'otu aka ahụ, buru n'uche nke ahụ mmelite dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play, n'ihi ya ị nwere ike ịnwale akụkọ niile agụnyere na egwuregwu ahụ.
1 Moddị ọhụrụ
1.1 Mgbanye ozi
1.1.1 Mgbanwe zuru oke
1.1.2 Ebumnuche Egwuregwu Egwuregwu Pụrụ Iche
1.1.3 Unique Mission mgbanye-eji égbè agbagbu na ngwa mma
1.1.4 Ugbo ala Uzo Puru iche
1.1.5 Ihe omuma ihe omuma nke puru iche
1.1.6 Ihe Pụrụ Iche nke Mgbasa Ozi
1.1.7 Ihe ohuru ohuru sitere na Mgbanye Ozi
2 Tesla (July 9-Septemba 6)
2.0.1 Ihe ngosi Gigafactory
2.0.2 Model Y na kwurula na-anya ụgbọ ala
2.0.3 Ọkara Semi
3 Ngwá agha ọhụrụ na mmelite ọgụ
3.1 New MG3 egbe
3.2 Ndozi maka M249
3.3 Compensationgwọ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ọkụ
3.4 Ntọala ntọala igwefoto nke atọ
3.5 Windo windo ọhụrụ
3.6 Ndozi na ndabara njikwa mgbagha
3.7 Otu Deathmatch: Mmezi Hangar
3.8 Mgbanwe na EvoGround - Payload 2.0
3.9 New ngwa ngwa wheel
3.10 Ngwongwo ndi nwere ike wepu ahihia
3.11 Ihe ngosi mmeri ohuru
3.12 Mmeri Ọhụrụ Mmeri
3.13 Ihe ngosi ammo ohuru ohuru
3.14 Ihuenyo ọnwụ ọhụrụ na-agba ọsọ
3.15 Omenala-eji égbè agbagbu
3.16 Pụrụ iche firearm uche customizations
3.17 Ọhụụ ndị otu na-ekere òkè na ya
4 Ife agha
6 Ray dị ebe a!
7 Ọganihu Ọhụrụ
8 RP onyinye
9 Ndozi arụmọrụ
10 Mgbanwe mpaghara nche
11 Nche nkwalite
12 Asọmpi onye mmeri ga-ebugo onyinye niile
13 Njirimara nkwalite
14 Ndozi sistemụ
15 Oge 1 Oge 1
15.1 Usoro ihe ịma aka
16 Ọkwa akara ngosi akara
17 Mmelite ihuenyo oge
18 Oge a na-akwụghachi ụgwọ ọrụ
Ọ ga-adị site na July 9 ruo September 6. N'akụkụ a, ụlọ ọrụ ike na teknụzụ DynaHex na-aga ụfọdụ "mgbanwe teknụzụ ogologo oge" na Erangel.
Mgbanwe zuru oke
DynaHex agbanweela isi isii nke Erangel dabere na nchebe ndị agha, itinye n'ọrụ ike, njem na lọjistik, na nyocha nke sayensị.
Centerlọ Transit (nke a na-akpọbu Pochinki)
Pochinki bụ isi nke netwọọdụ njem Erangel wee bụrụzi ebe agwaetiti a na-agafe agafe.
Port nke Georgopol (nke a na-akpọbu Georgopol)
A ga-erite uru Georgopol dị ka ọdụ ụgbọ mmiri site na iwebata ụlọ ọrụ iwu etiti etiti yana ụlọ nkwakọba ihe akpaghị aka.
Centerlọ Ọrụ Tech (nke bụbu Schoollọ Akwụkwọ)
Ebe mbụ nke ụlọ akwụkwọ a na-ekwusi ike na ịjụ ajụjụ agụmakwụkwọ na nyocha.
Ebe Nche (nke bụbu Ebe Ndị Agha)
Isi ndị agha bụ ọrụ maka ịchekwa nchekwa nke agwaetiti ahụ niile na inye nkwado agha.
Lọjistik Agency (nke bụbu Yasnaya Polyana)
Loglọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndekọ Ngwaahịa dị na Yasnaya Polyana na ọ bụ ebe a na-ekesa ngwa ahịa na-abata Erangel.
Ebe Ike (nke bụbu Mylta Power)
Organizationtù a na-enye Erangel niile ikike ma jikọtara ọgbọ ike ọhụụ na teknụzụ ọgbara ọhụrụ iji mepụta ụlọ anụ ụlọ nke agwaetiti na nke ndị agha.
Ebumnuche Egwuregwu Egwuregwu Pụrụ Iche
Igwe mbuli elu, ọnụ ụzọ na-akpaghị aka na nyiwe ndị ọzọ na-agagharị ga-apụta na mpaghara mepere emepe ka mma.
Iji mee ka njem na-aga nke ọma na Erangel, Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndekọ Ihe eguzobewo HyperLines na Erangel iji jikọọ obodo dị iche iche n'àgwàetiti ahụ.
Commandlọ ọrụ Command etinyela ngwa ọrụ ụgbọ njem a pụrụ iche na mpụga nke ụfọdụ obodo mepere emepe na ntọala iji nyere ndị ọrụ nchekwa aka ịgagharị na ikuku na-eduzi patrol patrol.
Unique Mission mgbanye-eji égbè agbagbu na ngwa mma
Ngwá agha ọhụrụ: ASM Abakan
ASM Abakan gbara ọkụ 5,56mm ma nwee usoro ịgba egbe atọ: akpaka zuru ezu, mgbawa abụọ, na otu egbe.
Adịgide Mgbakwụnye ike ukwuu melite firearm njikwa, welie vetikal / kehoraghachi recoil akara, na ọsọ agbapụ mgbake.
Ihe mgbakwunye a nwere ike belata mgbasa nke mgbọ na njikwa nchịkwa.
Nke a magazine ngwa nwere ike ruo eruo niile rifles na ukwuu enwekwu magazine ikike na-eri nke a ubé ogologo Akwajuru oge.
Ugbo ala Uzo Puru iche
Mgbapu amphibious nke antigravity nwere oche maka 2 ma nwee ike iji ya mee njem n'ụzọ dị nkasi obi na map niile.
Ihe omuma ihe omuma nke puru iche
Kenkwucha marking ngwaọrụ
Isiokwu a na-aga n'ihu na teknụzụ na egwuregwu. Ozugbo emere ya, ọ na-egosipụta akara nke ndị iro na-akpaghị aka ma gosipụta ọnọdụ ndị otu egwuregwu na minimap mgbe ha na-ekere òkè.
Ọta ọgba aghara
Pịa iji dobe ọta ọgba aghara na-adịgide adịgide nke nwere ike igbochi mgbọ niile.
Ihe Pụrụ Iche nke Mgbasa Ozi
Ihe ngosi Holographic nke Spawn Island
E webatara ihuenyo holographic na Spawn Island, na-egosi maapụ na ụzọ ụgbọ elu nke egwuregwu dị ugbu a, yana akara ngosi nke ndị egwuregwu ahụ mere.
Ima elu nzipu
N'ime oge ụgbọ elu na ịwụli elu, ndị egwuregwu nwere ike pịa ozugbo na maapụ itinye akara.
Ndị na-egwu egwu ga-enwe ike iji parachute na-akpaghị aka gaa akara akara mgbe enyere ọrụ ahụ.
Ihe ohuru ohuru sitere na Mgbanye Ozi
Agbakwunyere ihe nkiri ụgbọ elu maka ngwa agha tupu ha agbawa na ọdụ ụgbọ elu ka ọ dịrị mfe ikpe ikpe ebe ha ga-agbawa.
Agbakwunyere ihe ngosi iji gosipụta ebe ọnọdụ grenade na-achọ ịgbawa n'akụkụ egwuregwu.
Tesla (July 9-Septemba 6)
Omume nke ga - adị site na July 9 ruo Septemba 6.
Ihe ngosi Gigafactory
Ihe ngosi Tesla ga-egosi na eserese ngosi. Tụgharịa niile ngbanwe na usoro mgbakọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji malite usoro nke ịgbakọta ụgbọ ala ma wuo ụgbọ ala Tesla - Model Y.
Model Y na kwurula na-anya ụgbọ ala
Carsgbọ ala ndị kwụpụtara onwe ha na Tesla Gigafactory nwere ọnọdụ autopilot nke enwere ike ịrụ ọrụ n'okporo ụzọ na map iji were ndị egwuregwu na-akpaghị aka gaa ebe akara akara akara n'okporo ụzọ.
Vehiclesgbọ ala ndị a kwụụrụ onwe ha nke Tesla mepụtara ga-apụta n'amaghị ama n'okporo ụzọ n'ime ọhịa ma ga-akpaghị aka na-aga n'ụzọ ụfọdụ.
Nweta Ngwa agha site na mmebi nke ọkara iji dobe akpa ụgbọ.
Ngwá agha ọhụrụ na mmelite ọgụ
New MG3 egbe
New MG3 ìhè igwe egbe: Site na agba 7,62mm, ngwa agha a nwere otu ọnọdụ ịgba egbe, yana ọkụ ọkụ ya nwere ike gbanwee nke ọma na 660 ma ọ bụ 990 gbaa kwa nkeji, na-enye ohere maka ọgbụgba ọkụ na-aga n'ihu na ịgba ngwa ngwa.
Mgbe ejiri ya bipod, ọ na-agbadata nke na-agbaghasị ebe ọ na-adịkarị mfe. Ngwongwo a na-agba na ikuku Drops.
Ndozi maka M249
Ugbu a MG3 agbakwunyere na airdrops, a ga-ewepụ M249 na airdrops wee pụta na ala gafee map na ọnọdụ kpochapụwo.
Compensationgwọ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ọkụ
Agbakwunyere usoro dị n'otu maka egbe ọkụ na ọnụego etiti dị iche iche iji dozie nsogbu nke ọnụego mgbanyụ ọkụ na-agbanwe agbanwe mgbe ọnụego etiti dị iche.
Ntọala ntọala igwefoto nke atọ
Etinye otu nhọrọ iji dozie echiche echiche TPP.
Echiche nke TPP nwere ike gbanwee na ntọala.
Nhọrọ a agaghị emetụta ụfọdụ ngwaọrụ nwere ihuenyo nke nwere nnukwu elele anya.
Windo windo ọhụrụ
Glass gbakwunyere ụfọdụ ụlọ na Erangel na Miramar.
Enwere ike ịgbaji iko site na mwakpo melee, agbapụ, ma ọ bụ ịrịgo site na windo, ọ ga-eme mkpọtụ mgbe a ga-akụri ya, mana ọ gaghị eweghachi mgbe etinyere ya.
Ndozi na ndabara njikwa mgbagha
Nchịkọta akpaka ga-enwe nkwarụ mgbe agwa mmadụ na-eji ọgwụ.
Ọ bụrụ na-atụtụ melee ngwa agha mgbe a agwa ugbua nwere a isi ngwá agha, na melee ngwá agha ga-azọpụta ndabara.
Mgbe agwa anaghị enwe Achịcha, agwa ya ga-anakọta ma kwado ya achicha.
Ọ bụrụ na mgbọ egbe agbachaala (gụnyere mgboagha mgboagha) ma nwee ngwa ọgụ ọzọ nke nwere mgboagha, agwa ga-agbanwe ozugbo n'iji ngwa ọgụ a.
Ọkụ na-enweghị ammo agaghị eburu na-akpaghị aka.
Otu Deathmatch: Mmezi Hangar
Thekwado mkpuchi dị nso na ebe a na-efe efe ga-adị elu dị ka elu mkpụrụ osisi.
Mma nke minimap ka ọ dị mfe iji hụ ọnọdụ ọgụ.
Mgbanwe na EvoGround - Payload 2.0
Tencent ekwuola na ọ ga - emegharị EvoGround - Payload 2.0 iji mee ka ọ ka mma karịa mgbe ọ bụla maka onye ọ bụla.
New ngwa ngwa wheel
Ihe mgbakwunye na ihe mkpofu nwere ike ịgbakwunye iji tinye ihe n'iwepu / mkpofu.
Swipe akara ngosi / ihe eji emefu ihe iji mepee wiilị ma gbanwee ma ọ bụ jiri ihe.
Can nwere ike ime ka Ọrụ Ntugharị Ndenye na menu ntọala. Mgbe ịmechara ya, pịa ma jide akara ngosi Throwable iji jiri Ndenye Ntugharị.
Nwere ike ime ka ọrụ Ntugharị Ntugharị Ntugharị na nchịkọta ntọala. Mgbe enyere ya aka, tụgharịa wiil ahụ ma họrọ ngwa ngwa ịtụfu ihe iji mee ngwa ngwa.
Ngwongwo ndi nwere ike wepu ahihia
Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhapụ ọgwụ ndị ha na-ebu-oghere n'ụdị nchịkọta. Enwere ike ịnakọta ọgwụ ndị atụfuru.
Ihe ngosi mmeri ohuru
I merie, ị nwere ike ịkpọ ihe oyiyi iji mee ememme.
MVP nke otu mmeri nwere ike ịkpọ ihe oyiyi mmeri na otu ebe.
Enwere ike iji Emotes Ememme Pụrụ Iche n'akụkụ Akpụrụ Mmeri.
Mmeri Ọhụrụ Mmeri
Mgbe imeri na kpochapụwo mode, ị nwere ike tinye Photo Mode.
Nwere ike ịhọrọ zoo ma ọ bụ gosi ozi otu otu na Photo mode.
Nwere ike ịkekọrịta foto gị mgbe ị nụsịrị ha.
Ihe ngosi ammo ohuru ohuru
Mgbe ọ bụla magazin fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efu, ọnụ ọgụgụ na-egosi mgboagha fọdụrụ ga-agbanwe agba:
Mgbe 25% ammo fọdụrụnụ, ọnụọgụ ga-acha edo edo.
Mgbe i nwere pasent 10 nke ammo fọdụrụ, ọnụ ọgụgụ ahụ ga-acha ọbara ọbara.
Ihuenyo ọnwụ ọhụrụ na-agba ọsọ
Mgbe ị na-egwu egwu Replay, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ozi ọha na eze gbasara onye ọkpụkpọ kpochapụrụ gị.
Na data ahụ, ọ ga-ekwe omume ugbu a ịhụ data metụtara izi ezi nke agbapụ, gụnyere ugboro ole ọkpụkpọ ahụ kụrụ onye na-emegide ya, yana ugboro ole onye iro ahụ kụrụ ọkpọ.
A gbakwụnyere ọrụ akụkọ.
Enwere ike ịmegharị ma ọ bụ nwee nkwarụ ọnwụ na Ntọala.
Omenala-eji égbè agbagbu
Ndị na-egwu nwere ike hazie ngwa maka ngwa ọgụ ọ bụla ma setịpụ ngwa dị iche iche maka oghere dị iche iche.
Ozugbo ahazi ntọala ahụ, agwa ahụ ga-anakọta ma kwadebe ngwa ngwa ndị a mgbe ọ hụrụ ha.
Pụrụ iche firearm uche customizations
Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhazi ntọala uche nke omenala maka egbe ọ bụla, nke a ga-etinye n'ọrụ mgbe ị na-eji égbè ndị kwekọrọ na ya.
Ọhụụ ndị otu na-ekere òkè na ya
Mgbe otu onye otu nọ na ọgụ ma merụọ ihe, ọkwa ga-apụta gburugburu ebe ahụike ahụike onye otu ahụ iji gosi na ha nọ n'ọgụ.
Oge Royale gafee oge a na-enwe nnukwu mgbanwe n’ihi na mmadụ abụọ ga-anọchi ya niile. Ndị a bụ:
Royale Pass otu ọnwa: Tek Era (July 14 ruo August 12)
Royale gafere ọnwa otu: Project T (August 13 ruo September 13)
Mgbe RP S19 kwụsịrị, a ga-agbanwe Royale Pass na ọnwa nke Royale Pass, ndị egwuregwu nwere ike ikwu onyinye nnabata na-enweghị atụ mgbe ha nwesịrị ya na nke mbụ.
Oge ntọala: Gbanwee oge RP ruo otu ọnwa, a ga-ahapụ 2 RP otu mgbe nke ọzọ na nke ọ bụla. A ga-ahapụ RP M1 na RP M2 na ụdị a.
Ndozi ego: Gbanwee ọnụahịa RP nkịtị na 360 CU na ọnụahịa Elite RP na 960 CU (1200 ego ego).
Nsolata: gbanwere ogo kachasị na 50 na-agbanwe agbanwe ụgwọ ọrụ. Gaa na 50 iji nweta ihe omimi na inweta Legendary Firearm na Ntọala na 1.
Rewardsgwọ ọrụ ọzọ: Ndị na-egwu egwu nwere ike irite ụgwọ ọrụ n'efu ma ọ bụrụhaala na ha enweta RP.
Ozizi Ntọala: Belata oge nke ọrụ ịma aka RP site na izu 8 ruo izu 4, na-ebelata oge RP na-egwu oge n'otu oge.
Tweaks ndị ọzọ: Gbanwee ọnụahịa ikike EZ Mission, gbakwunye taabụ ọnwa Royale Pass, wdg.
Na-ewebata Agha Clan, ọnọdụ ebe ezinụlọ nke otu ụdị na ọkwa ọrụ na-alụso ibe ha ọgụ ụbọchị 14.
Ndị òtù ezinụlọ nwere ike mezue ndị ọzọ agha Clan iji nweta Pock Shock na ụgwọ ọrụ ụgwọ kwa ụbọchị.
Tupu ihe omume ahụ agwụ, ndị ezinụlọ nwere ezigbo ụgwọ ọrụ na-emeri ọgụ ezinụlọ a n'oge.
Ma mmeri nke ezinụlọ na onyinye onye ọ bụla na-eweta ụgwọ ọrụ mara mma.
Ray dị ebe a!
Ihe ohuru ohuru, Ray di ebe a iji mee ka emelite gi na ihe nile di nkpa.
Ihe omuma ohuru: Hụ bụ ikwere (naanị), a ga-enweta site na isonye na Mgbasa Ozi Ebumnuche na iru ihe achọrọ site na July 6 ruo Septemba 6
Ọganihu ọhụrụ: Oge Nlekọta Oge (naanị), enwere ike inweta tupu Septemba 13 ka ọ nọ mgbe oge Royale Pass na-agbanwe.
Ọganihu ọhụrụ: Nnọgidesi ike, nke a ga-enweta site na isonye na All Talent Weekly Championship.
Ọganihu ọhụrụ: Ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, nke a ga-enweta site na ịnweta nkwanye ùgwù maka RP na egwuregwu.
Ọganihu ọhụrụ: Dị oke egwu, nke enwere ike nweta site na ịmecha egwuregwu na inye onye otu egwuregwu.
Setị rụzuru na kpakpando na Neon Punk ga-alọghachi maka obere oge, nke a ga-ewepụ ruo mgbe ebighi ebi.
New RP Perk: ikike igosi nkwanye ùgwù na egwuregwu. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịkwanyere onye otu ibe ha ùgwù n'oge ọ bụla n'oge egwuregwu, a ga-egosipụta ozi nkwanye ùgwù na akụkọ nkata.
Ndị egwu natara nsọpụrụ nwere ike irite ụfọdụ isi ihe RP.
Nkwado IBL na nkwalite iji nyekwuo mmetụta ọkụ dị mma na map ma melite ọdịiche dị n'etiti textures.
Nkwado maka mgbasa ọkụ na mbara igwe, gụnyere mgbasa Rayleigh, mgbasa Mie, ikuku ikuku na mmetụta ndị ọzọ, iji mee ka mbara igwe pụta ìhè ma bụrụ eziokwu.
Nkwado maka ọgaranya ihe na-acha akwụkwọ ndụ, igwe ojii na-agbanwe agbanwe, nsonaazụ igwe ojii eji arụ ọrụ, wdg.
Mgbanwe mpaghara nche
Tencent agbakwunyela ihe omume na-atọ ụtọ na nnukwu ụgwọ ọrụ na Mpaghara Nchebe - Nyochaa vidiyo, yana ịkwalite usoro nyocha vidiyo na ahụmịhe arụmọrụ.
Agbakwunyere ihe omume iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịchọgharị ọdịnaya ihe omume.
Mmemme mbanye: Enwere ike ịnakọta ụgwọ ọrụ pụrụ iche mgbe enwere ọnụọgụ ụfọdụ nke ndị nyochaa vidiyo.
Ozi Nyocha kwa ụbọchị: ndị nyocha vidiyo nwere ike ịmeghe usoro nyocha na ịnakọta ụgwọ ọrụ.
Agbakwunyere ụgwọ ọrụ na-adịgide adịgide, dị ka uwe na-adịgide adịgide, okpokoro avatar, wdg, agbamume ma kwado ndị egwuregwu ka ha nọgide na-alụ ọgụ na ndị aghụghọ.
Mgbakwunye nkwalite ndị ọzọ iji lekwasị anya iwepụ ahịhịa ahịhịa, nkwụghachi azụ, ọhụụ X-ray, ebumnuche akpaaka, na ngwangwa
Mgbalị ndị gbasiri ike iji gbochie mmebi nke akụ dị iche iche.
Nọgide na-ewusi ihe nchebe gị ike megide mwakpo netwọk dị iche iche.
Asọmpi onye mmeri ga-ebugo onyinye niile
Nchịkọta nchịkọta mpaghara
Ọkwa agbakwunyere agbakwunyere agbakwunyere agbakwunyere agbakwunyere na ọkwa All-Talent Championship.
Ndị na-egwu egwu na-esonye na opekata mpe 1 egwuregwu kwa izu ga-etinyere na mpaghara ha maka izu ahụ.
Ndị otu ga-abanye n'ọchịchị ndị otu aghara mgbe ha mechara egwuregwu. Ogo maka mpaghara ọ bụla nọọrọ onwe ha.
Mgbe egwuregwu izu ụka na-agwụ kwa izu, ndị egwuregwu nwere ike ịnakọta ụgwọ ọrụ dabere na ogo ndị otu ha na mpaghara ha maka izu ahụ.
Ndị na-egwu egwu nwere ike ịrịọ ụgwọ ọrụ egwuregwu na-arụ ọrụ dabere na ọnụọgụ egwuregwu ha na-egwu kwa izu n'izu ọ bụla.
A na-emelite ogo ogo ogo kwa izu na ụgwọ ọrụ iji kwado maka izu ụka kwa izu.
Agbakwunyere aha na mmeri ohuru nke All-Talent Championship.
Ndozi ihe ndi mmadu nile
Nwayọọ gbanwee nhazi nke wiilị ahụ. Ntuziaka na styling anọgidewo otu ihe ahụ na ụda olu.
Mmeri Oge Ndozi
Gbanwee oge ndị egwuregwu nwere ike ịnọ n'ọgụ mgbe ha merisịrị 60 sekọnd.
Agha UI Ntọala
Gbanwee ụdị etiti ala nke bọtịnụ ọrụ ụfọdụ. Mee obere mgbanwe na ndabara ndabara nke Ntọala, Voice, Graffiti, na Emote bọtịnụ.
Ọnwụ Onyinye gosiputara mgbagha
Mgbe ndị egwuregwu na-achịkọta igbe ọnwụ nke onye ọkpụkpọ ọzọ na egwuregwu, mgbe ọnụọgụ isii na usoro itoolu nke igbe gbanwere, a ga-echeta nke a ka ha wee ghara ịgbanwe ọzọ.
Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhazi uche nke gyroscope mgbe ha na-agbada ngwa agha.
Gbakwunye mgba ọkụ iji tinye mgbagharị na gyroscope. Ozugbo enyere ntọala a aka ọ ga - agbanwe / elu maka gyro.
90 Fps dị ugbu a na eserese dị mma maka ụfọdụ ngwaọrụ ọhụrụ.
Pụrụ ime ụlọ ọkọlọtọ mmezi
Ihe ngosiputara nke di n’elu aka nri di n’elu na ebe anabataru ohuru na mmelite ohuru a.
Gwọ ọrụ nyocha ndozi
Ihuenyo nke a na-enye gị ụgwọ ọrụ ka mma. Agbakwunyere mmetụta nke bọtịnụ iji gbochie ndị ọrụ ịpị aka ngwa ngwa na ịwụnye ihuenyo na mberede.
E meela ka nyocha ọgụ ahụ pụta ìhè. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịnye ọkwa, họrọ akara, ma nye ndị enyi ha nzaghachi egwuregwu.
Na-achọpụta ozi na ihuenyo mbụ
Fọdụ egwuregwu nwere nsogbu ịghọta isi ihuenyo otu interface n'ihi na ọ gosipụtaghị ozi na-ejighị n'aka. Emeziwo nke a.
Ntinye aka na ọrụ Vehicle na X-Suit agbanweela.
Na-egwuregwu na-amasị mma
Mmasị na mbido egwuregwu ma ọ bụ mgbe mmeri na-egosi ọfụma ndị otu a na mmetụta Mmasị ndị pụrụ iche.
Oge 1 Oge 1
Usoro ihe ịma aka
Usoro ihe ịma aka bụ usoro ọzọ nke iwu eji enyocha omume onye ọkpụkpọ n'egwuregwu na-enweghị agbanwe usoro iwu egwuregwu mbụ.
Nweta isi ihe ịma aka ma ọ bụrụ na ịkwụsịghị egwuregwu ahụ, tufuo ma ọ bụ kpochapụ ndị otu gị maka egwuregwu zuru ezu.
Ọ bụrụ na ndị egwuregwu tufuo egwuregwu mgbe ha nwere ihe ịma aka, ha ga-efunahụ isi ihe na-adabere na ọkwa ha.
A na-enye isi ihe ịma aka ndị ọzọ maka ịmecha egwuregwu mbụ nke ụbọchị ọ bụla.
Enweghi ike ikpokọta ihe ịma aka ozugbo a ruru ego kachasị.
A na-agụ Points llema Aka iche iche dabere n'ihe nkesa na egwuregwu.
Ihe ịma aka agaghị agafe n'oge ndị ọzọ.
Ọkwa akara ngosi akara
Emeziwo ngosipụta nke akara ngosi dị larịị iji meziwanye nkọwa ha.
Mma larịị kwalite mmetụta.
Mmelite ihuenyo oge
Egosiputa ihe omuma banyere ihe ngosi nke oge.
Agbakwunyela usoro utịp na nkwonkwo enyi.
Gbanwee otú e si enye onyinye.
Screengwọ ọrụ ihuenyo ihuenyo emelitere.
Oge a na-akwụghachi ụgwọ ọrụ
Onyinye larịị ọlaọcha agbakwunye na mmelite ahụ.
Gbakwunyere ụgwọ ọrụ maka ọkwa Ace mgbe ị kewasịrị ọkwa ahụ.
Mụbara ụgwọ ọrụ maka obere ọkwa.
Kewaa ọkwa Ace na ọkwa dị larịị.
A gbakwunyela ụgwọ ọrụ na ịkekọrịta nhọrọ maka ọkwa ndị ekewapụrụ n'ọkwa Ace.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ozi niile nke PUBG Mobile melite 1.5 na-eweta
Ngwa 6 kachasị mma iji kọwaa ọdịyo na ederede
Egwuregwu ping ping 6 kachasị mma maka gam akporo